Isilimela 23, 2018 admin
Isebenzisa entrepreneur $ 67 yezigidi imali ukuba abe exchange cryptocurrency
Ekuqaleni kwale nyanga, kwabhengezwa ukuba Eric Cheng, entrepreneur eSingapore, bebesoloko begcina ubomi bakhe nokuthengisa impahla yakhe real, ababandakanya Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari kunye Porsche, ukuba utyalo-mali ngokupheleleyo-owned kwi lonaniselwano cryptocurrency Japanese ebizwa BitTrade sizuze.
Kutheni Cheng wayekulungele ukuthatha umngcipheko
Ngaphantsi kweveki eyadlulayo, Bithumb, inkulu cryptocurrency exchange South Korea kaThixo, ubunzima ulwaphulo yokhuseleko andabikho ngaphezu $ 30 million kwiingxowa zomxhasi ezigcinwe kwii-asethi digital ezifana Bitcoin and Ethereum. Iqela Bithumb ubhengeze ngokusemthethweni ukuba nkampani yokuxhobisa ngokupheleleyo nabathengi ngemali yequmrhu zigcinwe cryptocurrencies ezixabisa $ 450 million ngo June 2018.
kunjalo, kunye Exchange cryptocurrency amancinane, kunzima ukukhusela ilahleko ekungenwe kuhlaselo Uchwepheshe, ingakumbi xa imali igqekeziwe mkhulu ezinkulu yenkampani ekhoyo. Umzekelo, i cryptocurrency sesithi inkulu Japan, eyaziwa ngokuba Coincheck, ezilahlekileyo $ 450 million ukuya Nem kwi kuhlaselwa Uchwepheshe yakutshanje, kwaye ukusilela buyiselo ngu abatyali neziphumo istock exchange kokufaka isicelo bankruptcy.
Ngoko ke kukho ingozi yokufumana lonaniselwano cryptocurrency nangona elinephepha eliphezulu nzuzo, ukususela exchange kufuna ababhekisi phambili onamava kakhulu kwaye aneziphiwo, neengcali zokhuseleko kunye neengcali ze-IT. nkqu Coincheck, awayekade stock exchange inkulu Japan, wavuma ukuba lomnqweno yimfumba eso kubangelwa kukungabikho yenkampani leengcali zokhuseleko.
cheng, ochithe yonke yakhe $ 67 million lokonga koko abanye bafumane BitTrade, Wathi yena akayi kuzisola ukuthatha umngcipheko kwaye uyaneliswa wayokusibuka.
“Ishishini cryptocurrency ikhula ngamandla, ngoko isinxibo kakuhle nezilawulwa mvume ngundoqo ukunyuka intlanganiso, kunye nalo iqonga Japanese FSA-mvume, Ndiza kusebenza ngokusondeleyo kunye nabalawuli kwisikali iqonga emhlabeni,” wathi Cheng.
Kusenokwenzeka ukuba Cheng ngamandla ayegqatse phambili kunye nezicwangciso zayo ukuthenga BitTrade ngenxa regulatory ubume exchange. BitTrade uhlala elinye iqela kokutshintshiselana cryptocurrency e-Japan mvume yavunywa yi-Financial Agency Services (FSA), kunye nenkqubo imvume kurhulumente ukuba enze njenge Digital Asset Exchange iyabiza kwaye kunzima.
Ingxelo Daily Market Kraken for 22.06.2018
$250M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Blockchain News 22.06.2018
Post Next:Blockchain News 24.06.2018